Ukuprintwa kweNcwadi yokuThicilela iNcwadi eSoftware eTshayina
Ulapha : Umphandle>zonke Products>Ukuprintwa kweencwadi>Softcover Book Printing
Ukudityaniswa kwencwadi ebotshiweyo kunesistim sezihlalo, Ukonakala iyabophelela, ukubopha okugqibeleleyo kunye nokubopha okugqibeleleyo ngokuthunga. Ukuzibophelela okugqibeleleyo kunye nokubopha okugqibeleleyo ngokuthunga zezona ndlela zixhaphakileyo zokubopha.
Ukubopha ngokugqibeleleyo - Amaphepha afakwa kwaye asongwe ecaleni komqolo ukuphucula ukubopha phakathi kwephepha kunye neglu. Olu hlobo lokubopha lunexabiso eliphantsi kunokubopha ngokugqibeleleyo ngokuthunga, kodwa amaphepha kulula ukuwa.
ukubopha ngokugqibeleleyo kuthungiwe - Kuyafana nokubopha okugqibeleleyo rhoqo kunye nokongezwa kweeflip kwisikhombisi ukwenza incwadi enje "ngothuli-ibhatyi efana" kwifomathi yephepha. Amaphepha afakwa kwaye asongwe ecaleni komqolo ukuphucula ukubopha phakathi kwephepha kunye neglu. Iglu yoshishino ifakwa emqolo apho amaphepha athi emva koko adityaniswe kwikhadi lesitokhwe. Olu hlobo lokuzibophelela luya kuba yifomathi entsha edumileyo kwaye inikezela ngenkcazo ebukeka ngakumbi kwincwadi enoqweqwe oluthambileyo.
Ngokwesiqhelo iincwadi zokugubungela ezithambileyo iphepha lisebenzisa iphepha lobugcisa eline-gloss / matt lamination. Isitokhwe sephepha sine-200gsm / 250gsm / 300gsm / 350gsm. Kwincwadi yokubhalela iphepha elingaphakathi lisebenzisa iphepha elilinganayo okanye iphepha elingenamithi, isitokhwe sephepha sine-60gsm / 80gsm / 100gsm / 120gsm / 140gsm / 160gsm. Kwincwadi yemibala iphepha elingaphakathi lisebenzisa iphepha elibengezelayo / matt, isitokhwe sephepha sine-80gsm / 105gsm / 128gsm / 157gsm.
Ukuprintwa kweNcwadi yokuLungiselela iNcwadi eFanelekileyo eChina
Ixabiso eliphantsi leKhathalogu / Inkonzo yokuPrinta iNcwadana eneSsoft Cover
I-China ephezulu yoMthengisi oPheleleyo oPrintiweyo weMagazini yokuPrinta iMagazini
Umgangatho ophezulu wokushicilelwa kwencwadi yokushicilela ephepheni ebiza ixabiso eliphantsi
Ivenkile yokuPrinta yeNcwadi ePhakamileyo ye-A4 esemgangathweni eTshayina
Ubukhulu Elungiselelweyo Quality High Catalogue Yoshicilelo Nge Bound Ogqibeleleyo
Ukuprintwa kweJenali ebophelelweyo eyi-A5
Shicilela ngokuNcomekayo ukuBopha kweNcwadi yokuPhefumlela
Ubungakanani boBume beNdawo yokuGcina ngokuGqibeleleyo yokuDibanisa iNqaku leMibala ePheleleyo yeNgcaciso